AGD ဘဏ်၏ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် Savings Deposit အတိုးနှုန်းအသစ် - AGD Bank
AGD ဘဏ်၏ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် Savings Deposit အတိုးနှုန်းအသစ်
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ငွေစုဆောင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ မိမိအနာဂတ်အတွက်၊ စိတ်ကူးထားသည့် အိမ်လေးအတွက်၊ ပညာရေးအတွက်၊ သားသမီးတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက် စသည်ဖြင့် စိတ်ကူးကိုယ်စီဖြင့် ငွေစုတတ်ကြပါသည်။
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ငွေစုဆောင်းမှုများပြုလုပ်ကြပါသည်။ မိမိအနာဂတ်အတွက်၊ စိတ်ကူးထားသည့်အိမ်လေးအတွက်၊ ပညာရေးအတွက်၊ သားသမီးတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက် စသည်ဖြင့် စိတ်ကူးကိုယ်စီဖြင့် ငွေစုတတ်ကြပါသည်။
ဒါကြောင့် ပမာဏနှင့် ကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိသည့် ငွေစုဘဏ်စာရင်း (Savings Deposit) ကို လူအများစုကရွေးချယ် ဖွင့်လှစ်ပြီး စိတ်ချလုံခြုံစွာငွေစုကြပါသည်။
ယခုကျရောက်သည့် world saving day မှာ လူကြီးမင်းတို့အားလုံးအတွက် AGD ဘဏ်၏ တစ်ဦးချင်းအပ်နှံထားသည့် ငွေစုဘဏ်စာရင်း (Savings Deposit) ၏ အတိုးနှုန်းအသစ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၆% တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက AGD ဘဏ်ရဲ့ Call Centre ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ (၀၁-၂၃၉၉၃၃၃) ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
AGD ဘဏ်၏ CEO နှင့် မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးထူးထက်တေဇသည် (၃)ရက် မေလ ၂၀၂၂ တွင် Swings of Success ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဝင်များ၊…
N'Khai Bum မြစ်ကြီးနား ဂေါက်ကလပ်၌ ကျင်းပခဲ့သော Swings of Success ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
(၃) ရက် မေလ ၂၀၂၂ တွင် AGD ဘဏ်မှ ဦးဆောင်၍ Swings of Success ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။…
Updated: 26. 05. 2022